बालबालिकाहरु सामाजिक जीवनबाट कसरी विमुख हुँदैछन् ? - Sajhamanch
२०७७, फाल्गुण १९ गते दिउसोको ०४:२७:५९ बजे Wednesday 3rd March 2021
तपाईं-हामीले अनुभव गरेकै छौं कि, बच्चालाई बच्चाजस्तै साथीहरु चाहिन्छ । उनीहरुले आफ्नो उमेर समानका दौतरी खोज्छन् । यसरी एकअर्का खेल्ने क्रममा उनीहरुले धेरै कुरा सिक्छन् । बुझ्छन् । बच्चासँग बच्चा नै साथी छ भने उनीहरुले आमाबुबा खोज्दैनन् । मोवाइल खोज्दैनन् । टेलिभिजन खोज्दैनन् । एकअर्का खेलेर, उफ्रिएर, झगडा गरेर (बच्चाबीचको झगडालाई सामान्य मान्नुपर्छ) समय कटाउँछन् । यसले प्रत्यक्ष रुपमा धेरै कुरामा फाइदा मिलिरहेको हुन्छ ।
के उनीहरु घरमा आएको नव आगन्तुकलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्छन् ? बाटोमा भेटिएका कुनै अनाथ साथीलाई सहयोग गर्छन् रु घरमा आमाबुबाको काममा सहयोग गर्न तत्पर हुन्छन् ?
February 19, 2021 7:18 pm | टिप्स/जानकारी
48 mins अगाडी
फागुन २५ देखि पशुपतिनाथमा विशेष पूजा